Hita izany ao amin’ny Nomery 11 : 16,17 : « Dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy : Manangona 70 lahy amin’ny loholon’ny Isiraely ho ety amiko, dia izay fantatrao ho loholona amin’ny fireneny sy mpifehy azy ; ary ento miaraka aminao ho ao amin’ny tranolay fihaonana izy. Dia hidina Aho ka hiteny aminao eo ; ary Izaho haka amin’ny Fanahy izay ao aminao ka hametraka izany ao amin’ireo, fa tsy ianao irery intsony no hitondra » :
Nila nifidy olona 70 Mosesy hiara-hitondra ny vahoakan’Andriamanitra sy hifehy azy, ary ireo olom-boafidy ireo no entin’i Mosesy hatokana eo anatrehan’Andriamanitra (Tranolay fihaonana) mba handray ny Fanahin’Andriamanitra mariky ny fanamafisana ny fifidianan’Andriamanitra azy.
Ny Fiangonana fonenan’ny Fanahy Masina no misolo toerana an’i Mosesy ankehitriny mifidy ireo olona vitsivitsy hiara-hitondra sy hiambina ny fanahin’ny vahoakan’Andriamanitra. Entina hatokana eo amin’ny Alitara izy ireo mba handray ny Fanahin’Andriamanitra mariky ny fifidianan’Andriamanitra.
Hita ihany koa ao amin’ny Asan’ny Apostoly 6 : 2-4 : « Ary ny roa ambin’ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe : Tsy mety raha mandao ny Tenin’Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin’izany ry rahalahy mizahà fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy sy fahendrena, mba hotendreny hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa haharitra amin’ny fivavahana sy ny fampianarana » :
Ny Apostoly izay Rafitry ny fiangonana voalohany dia nanohy ny fifidianana olon-kafa mba hiara-miasa amin’ny fiainan’ny fiangonana toy ny asa fanompoan’ny Diakona.
Anjaran’ny kristiana manaiky hiasàn’ny Fanahy Masina no mifidy olona feno ny Fanahy Masina sy ny fahendren’Andriamanitra.
Noho izany, tena fomba fiasan’Andriamanitra teo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha sy ny fiangonany ao amin’ny Testamenta Vaovao ny fifidianana tompon’andraikitra ho mpiara-miasa Aminy.
Foto-kevitra vistivitsy no hojerentsika mahakasika ity fifidianana ity :
Ny fifidianana sy ny hevitr’Andriamanitra
Hevi-diso momba ny fifidianana
Izay andrasan’i Jesoa amin’ny kristiana hiatrika fifidianana
NY FIFIDIANANA SY NY HEVITR’ANDRIAMANITRA :
Fomba fanehoan-kevitra ny fifidianana ho an’Andriamanitra ary tanjony amin’izany ny hanambarany ny fifidianany ireo mpanompony sy ny manodidina azy.
Ny Zanak’Isiraely, ohatra, dia voalaza ombieny ombieny fa noho ny Fitiavan’i Jehovah Andriamanitra azy ireo no anton’ny fifidianana azy ireo, Isaia 41 : 9 sy Isaia 43 : 10 : « Mpanompoko ianao, efa nofidiako fa tsy mba nariako…ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, sady mapanompoko izay efa nofidiko, mba hahafantaranareo sy hinoanareo Ahy, ka azonareo tsara fa Izaho no Izy » : TIAN’ANDRIAMANTRA MATOA NOFIDINY.
Tonga mpiara-miasa amin’Andriamanitra hitory ny maha-Andriamanitra be fiantra sy be famindrampo ny olona noho ny fifidianany azy.
Ireto misy hevitra vitsivitsy mahakasika ny fifidianana sy ny fiainan’ny fiangonana :
Andriamanitra mifidy :
Vahaolana lehibe tsy hisian’ny fifangaroan-kevitra momba ny fifidianana ao am-piangonana izany.
Misy mantsy no mihevitra fa noho izay maha izy azy, na noho ny toerany, na noho ny hareny sy ny fananany, na noho ny hafanam-pony amin’ny fanaovan-draharaha ao am-piangonana no naha voafidy azy ho amin’ny andraikitra iray. Indraindray aza moa dia misy mihitsy mahavatra mamory ny ankohonany na ny havany sy ny namany ka manentana azy ireo hifidy azy. Maro koa ny mety hihevitra fa azy ny fiangonana fa tsy zava-boaharin’ny Fanahy Masina.
Fahadisoana tanteraka izany fa Andriamanitra dia miantso sy mifidy izay tiany ho mpiara-miasa Aminy :
« Izaho no nifidy anareo » (Jaona 15 : 16)
Ny fifidianana tanterahina ao amin’ny Fiangonana dia fomba iray entin’Andriamanitra maneho ny fitokisany ny fiangonany ka nametrahany andrikitra haneho hita maso izay safidiny izay. Fitiavan’Andriamanitra ny fiangonany sy ny fitokisany azy ny fahafahan’ny Fiangonana mikarakara fifidianana.
Koa izany rahateo no tsy mba hisian’ny FAMPIELEZAN-KEVITRA (des propangandes) amin’ny fifidianana atao any am-piangonana satria MANAKONA NY SAFIDIN’ANDRIAMNAITRA izany.
Izay tian’Andriamanitra ihany no antsoiny fa maneho izany ho hita maso no anjaran’ny Fiangonana.
Mosesy, ohatra, na dia tsy nahay taratasy (illettré) aza dia voafidy ho solon-tenan’i Jehovah hifandahatra amin’ny Egyptiana hanafaka ny zanak’Isiraely hiala any Egypta. Mpiandry ondry no asany nefa dia niantefa taminy ny safidy.
Davida, ilay zazalahy mpiandry ondry tany an-tsaha, no nofidian’Andriamanitra handimby an’i Saoly ho Mpanjakan’Isairaely. Tsy ny fisehoana ivelany no nifidianan’Andriamanitra an’i Davida fa hoy ny nambaran’i Jehovah « Aza mijery ny tarehiny na ny hahavon’ny tsanganany, fa tsy mba toy ny fijerin’ny olona no fijerin’i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa JEHOVAH KOSA MIJERY NY FO » (1Samoela 16 : 7).
Jeremia mpaminany raha vao 23 taona monja no nofidin’Andriamanitra mba ho mpiara-miasa Aminy ka nitenenany hoe :
« Hatry ny foiny ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an’ny firenena » (Jeremia 1 : 5).
Namaly sy niàla izany fifidianana izany i Jeremia ka nilaza hoe « Indrisy, Jehovah Tompo ô ! Indro tsy mahay mandaha-teny aho fa mbola zaza » (Jeremia 1 : 6). Fa hoy Jehovah taminy « Aza manao hoe mbola zaza aho, fa handeha amin’izay hanirahako anao ianao, ary izay rehetra handidiako anao no Hambaranao » (andininy 7). Narahiny teny fanomezan-toky izany ka hoy ny Tompo taminy « Aza matahotra azy ianao, fa homba anao hamonjy anao Aho, hoy Jehovah » (Jeremia 1 : 8).
Saoly (ilay lasa hoe Paoly) nanenjika sy namono ny kristiana nefa niova fo, no nofidian’i Jesoa ho « Fanaka voafidy ho fitondrana ny anaran’i Jesoa » (Asan’ny Apostoly 9 : 15). Raha olombelona no nifidy dia tsy i Saoly mihitsy no niantefan’ny safidiny. Nanova an’i Saoly anefa ny fifanenàny tamin’i Jesoa sy ny fibebahany tamin’ny nanenjehany sy namonoany ny kristiana. Nanjary tena mpiara-miasa nitokisan’Andriamanitra sy ny fiangonana izy satria tonga olom-baovao.
Noho ireo antony vitsivitsy ireo ary dia azo lazaina fa familiviliana ny fifidianan’Andriamanitra ny fitadiavana hevitra hampandany ny tena na olona amin’ny fifidianana ataon’ny fiangonana.
Izay rehetra voafidy ihany koa anefa dia mila manaiky fa Andriamanitra mihitsy no nifidy azy ao amin’io andrikiny io. Ny asa fanompoana an’Andriamanitra no manery azy tsy ho tafandry mandry amin’ny fanatanterahana izany.
Andriamanitra miantso :
Ny fifidianan’Andriamanitra dia mifamatotra amin’ny fiantsoany ihany koa. Izany hoe izay voafidy dia voaantso, na koa izay antsoin’Andriamanitra dia voafidiny.
Matetika mantsy dia sadaikatra ihany ny mpanompo sasany rehefa voafidy amin’ny andraikitra iray satria, dia mieritreritra izy fa tsy antonona azy io toerana io na mety tsy ho vitany satria tsy hainy. Miezaka mitady fomba hialàna amin’izany antso izany izy araka izany satria tsy fantany ny fifamatoran’ny atao hoe ANTSO sy FIFIDIANANA.
Tsy vitsy ny mpanompo nanana hevitra toy izany ao amin’ny Baiboly : Mosesy, Isaia, Jeremia, Jona,… ary isika. Saingy rehefa nantsoin’Andriamanitra dia nampahereziny mba hahalala ny hevitry ny safidiny.
Noho izany mamaly ny antso no fifaliana feno ho anao toa an’Isaia niteny hoe « Inty aho, iraho aho » (Isaia 6 : 8b).
Manamarika ny antson’Andriamanitra ireto zavatra vitsivitsy ireto araka ny Eksodosy 3 : 1-22 ; Isaia 6 : 1-12 ; Lioka 1 : 28 ; Asan’ny Apostoly 9 : 3-6,… :
Manaitra antsika amin’ny alalan’ny famantarana Andriamanitra rehefa miantso (Ohatra : Mosesy : ny roimemy)
Fantany ny olona iray matoa antsoiny (Isaia : avy amin’ny taranaka mpanota)
Antsoiny amin’ny anarany satria fantany fa hahavita io asa fanompoana iantsoany azy io
Omeny fandaminana sy fiofanana ary fampianarana izay antsoiny alohan’ny andehanany hanao ny asa fanompoana
Mihaino sy miady hevitra amin’ilay antsoiny Izy ka mankahery azy
Manome vahaolana avy hatrany Izy manoloana ny fisalasalana sy ny sakana ary ny tahotra.
Omeny ny votoatin’ny iraka dia ny asa misiona izany
Maneho ny fombàny (fiarahany) ilay nantsoiny izy toy ny fanomezana mpiara-miasa sy fitaovana.
Lazainy amin’izay ny tanjon’izao iraka izao.
Izay rehatra voafidy dia tokony hahatsapa sy maharaka tsara ireo zotran’ny fiantsoana ireo.
Andriamanitra mandamina :
Fomba iray entin’Andriamanitra maneho ny fandaminany ao am-piangonana ny fifidianana hoy isika tany am-boalohany. Fanahin’Andriamanitra, izay omeny ny Fiangonana ny fanahin’ny fandaminana.
Koa diso ny fisainana fa dia hevitra aroson’ny mpitondra fiangonana na ny rafi-pitondrana, araka izay tiany fotsiny ihany ny fifidianana ao am-piangonana. Endrika iray hitarafana ny fisian’izay fandaminana izay ny fisian’ireo Fitsipika sy fandaminana momba ny fifidianana any am-piangonana.
Ho an’ny resaka fifidianana manokana dia tsara ny manamafy ireto dingana ireto raha tiantsika ny hisian’ny filaminana marina :
Mametraka ny asa eo am-pelatànan’Ilay niantso sy nifidy : FIAINAM-BAVAKY NY FIANGONANA mialoha-mandritra-aorian’ny fifidianana (Eks 4 : 31 ; Lioka 23 : 46 ; Jaona 19 : 30 ;…).
Fiomanana tsara sy matotra (Eks 3 : 1-22 ; Isaia 6 : 1-6 ; Matio 4 : 18)
Fitsipika sy toro-marika iraisana (Nom 11 : 16,17 ; Asa 6 : 2-4 ; Titosy 1 : 5-6 ; 1 Timoty 3 : 8-9.11 ; 1 Timoty 6 : 11-12 ;
2Timoty 1 : 7 ;…)
Fanofanana sy fampianarana ny mpifidy sy izay voafidy (Lioka 6 : 12-19 ; Lioka 9 : 1-6 ; Lioka 10 : 1-12 ;…)
IREO HEVI-DISO MOMBA NY FIFIDIANANA :
Fiangonana fa tsy politika
Asa fanompoana fa tsy voninahitra
Fahavononana fa tsy an-tery
Fiangonana fa tsy fahefana Politika :
Ny politika matetika dia hitsinjovana tombontsoan’olona iray na antokon’olona. Ny seza politika koa dia mety ho sezam-boninahitra sy sezan’ny vola aman-karena. Fifampiandaniana sy fitsitokotokoana ny fifidianana politika noho ny foto-kevitra tsy mitovy. Famaliana faty ny fahavalo ny fifidianana ara-politika (Vengeance politique).
Tsy azo atao ny mampifangaro ny fifidianana any am-piangonana sy ny fifidianana ara-politika :
Ny fifidianana any am-piangonana dia fifidianana eo ambany fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fitsilovan’ny Fanahy Masina
Ny fifidianana any am-piangonana dia mibanjina tanjona lehibe iray dia NY ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA ka izay hofidiana dia ho vonona handray izany andraikitra napetrak’i Jesoa tamin’ny fiangonana izany.
Hoy i Jesoa ao amin’ny Matio 28 : 19-20 :
« Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehàna ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo ; ary indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao ».
Araka izany izay voafidy dia tsy hipetraka eo ambony seza fa ho vonona hitsangana sy handeha hanao ny iraka lehibe nanirahana ny fiangonana eto amin’izao tontolo izao. Tsy toeram-boninahitra ny sezan’ny olom-bofidin’Andriamanitra fa toeran’ny fanompoana sy ny fandavan-tena. Izany no hevitra fonosin’ny teny hoe DIAKONIA (= Manompo, mihosotra vovoka, andevon’ilay Tompoina, manetry tena).
Koa ireo olom-boafidy (Diakona, Biraon’ny Tafo, Biraon’ny Sampana,…) dia ho vonona hiatrika izany iraka izany amin’ny fahazotoana, amin’ny fanetren-tena, tsy hila tambiny (recompense) na sitraka amin’ny olona fa noho ny fanekeny ny irak’Andriamanitra irery ihany.
Ny tambin’ny fifidianana ho an’ny olom-boafidy rehetra dia ny fiainana mandrakizay raha maharitra sy manao tsara izany izy.
Ny fifidianana any am-piangonana dia kendrena mba hifanatonana sy hifankatiavana « Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanreo ; eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa » (Jaona 13 : 34).
Tsy azo heverina ny fanilikilihana ny hafa izay noheverina fa tsy nifidy ny tena. Matetika ihany koa mihena ny risi-pon’ny olona (Motivation) raha tsy voafidy intsony ka mandray fanapahan-kevitra ny hametra na hampiato ny fanaovany ny asan’Andriamanitra mihitsy aza. Tsarovy matoa ianao tsy voafidy dia manana ny hevitra hiheverany anao aloha Andriamanitra.
Ianao sy i Jesoa no mahalala hoe Nahoana ? Mandiniha tena fa aza manome tsiny olona !
Fiaraha-miasan’ny daholobe aorian’ny fifidianana no endriky ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavany sy ny nifidianan’Andriamanitra. Tsy misy mpomba sy mpanohitra izany akory ao am-piangonana tahaka ny any amin’ny sehatra ara-politika (Romana 11 : 28-29 ; Romana 12 : 3-13 ; 1 Kor 12 : 4 ; 1Petera 4 : 10)
Ny tombontsoa ho an’ny rehetra mba ho voavonjy sy hanompo an’Andriamanitra araka ny fanomezam-pahasoavany avokoa no tanjona hikarakarana ny fifidianana.
Fiombonana amin’ny Rafitry ny Fiangonana FPMA ny fifidianana izay atao isaky ny Roa taona araka izay voalazan’ny Fitsipika Anatiny sy ny Fitsipiky ny FOIBE FPMA. Manamafy ny fiombonana sy ny firahalahiana amin’ny Tafo FPMA rehetra ihany koa izany.
Fandresen’i Kristy no tokony ho fandresen’ny Fiangonana nahavita fifidianana.
Asa fanompoana fa tsy voninahitra :
Nantsoina hiasa sy hanompo izay voafidy ao am-piangonana, satria hoy i Jesoa « Izay mino Ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy » (Jaona 14 : 12).
Hiasa fa tsy hotompoina no sahy miatrika fifidianana any am-piangonana. Tandremo fa mety ho fandrika goavana amin’ny asa fanompoanao mihitsy ny fiheverana fa misondrotra ny voninahitra rehefa voafidy ho amin’ny andrikitra ao amin’ny fiangonana. Izay te ho lehibe dia midina maka ny toeran’ny mpanompo (Marka 9 : 35 ; Matio 23 : 10­-12).
Tsy misy fifandraisany ny fifidianana any am-piangonana sy ny voninahitr’olombelona.
Tsy mampietry na mampitombo voninahitra ny fifidianana. Andriamanitra irery ihany, amin’ny alàlan’i Jesoa Kristy irery ihany no omem-boninahitra, satria Izy no miantso sy mifidy araka izay safidiny. Io safidiny io dia mety hiantefa amin’izay heverinao fa tsinontsinona ao am-piangonana « Ny vato nolavin’ny mpanao trano rahateo no tonga fehizoro indrindra » (Salamo 118 : 22).
12 no isan’ny Apostoly niaraka tamin’i Jesoa, tsy ireo ihany anefa no niara-niasa tamin’ny Tompo, fa tao ihany koa ireo mpianatra 70 lahy (Lioka 10 : 1-12) sy ireo vehivavy izay nahafoy ny fanànany mihitsy noho ny fanarahana ny Tompo (Ohatra : Maria Magdalena,…).
Fahavononana fa tsy an-tery :
Zava-dehibe eo amin’ny fifidianana ny fahavononan’ny mpandray anjara rehetra (ny mpifidy sy ireo izay hofidiana ary ny mpikarakara fifidianana) : Fahavononana ara-panahy, ara-tsaina sy ara-batana.
Ireto misy singa hamaritana ny fahavononana eo amin’ny resaka fifidianana :
Fanoloran-tena ho an’i Jesoa Ilay nifidy no ataon’ny tsirairay.
Faharesen-dahatra avy ao anaty hamaly ny antson’ny Tompo ka tsy ny hirehareha sy ny hitady tombontsoa no tanjona fa ny hamaly toa an’Isaia hoe « Inty aho, iraho aho » (Isaia 6 : 8b).
Raha vonona ianao dia hampianarina sy hofanina (formation) na tsy mahay aza : ny maro tamin’ny mpianatry ny Tompo dia olona tsy nahita fianarana fa olona sahirana ara-pivelomana, nofànin’i Jesoa sy nampianarany anefa ireo rehefa nanaraka Azy hany ka lasa tena havanana tamin’ny asa fanompoana. Matokia ny Fanahy Masina Ilay mpampianatra hendry sy mahay indrindra.
Isan’ny lesoka ho an’ny kristiana, raha mitàha amin’ny finoana hafa ny fananana henatra manoloana ny asa miandry. Fihetsika tokony asehontsika ho fijoroana vavolombelona amin’ny antson’ny Tompo ny fahasahiana hanolo-tena rehefa ao amintsika ny fahavononana. Araka ny voalazan’i Paoly hoe « Tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako » (2 Timoty 1 : 12).
Fantatrao ve ny maha-zava-dehibe sy ny lanja ary ny mety ho vokatr’io fifidianana io eo amin’ny fiainam-piangonana ?
Vonona tsara ve ianao hanaraka ny Fitsipika sy fandaminana rehetra isan’ambaratonga misy ao amin’ny Fiangonana ?
Inona no anjara toeranao ao amin’io fifidianana io ? Fantatrao ve ny lanjan’ny fanatrehanao na mety tsy ho fanatrehano io fifidianana io ?
Tsinjonao ve ny ho akon’ny fandàvanao ny antson’ny Tompo ao amin’ny fiainan’ny Fiangonana sy eo amin’ny fiainanao (Ohatra : Jona mpaminany)?
Tsinjonao ny olana ary te handray anjara ianao hamahàna sy hanarenana izany : Aza matahotra, manolora tena fa antson’Andriamanitra izany, Nantsoina tamin’izany i Paoly hoe « Mità mankaty…ka vonjeo izahay » (Asa 16 : 9).
1.3 IZAY ANDRASAN’I JESOA AMIN’NY KRISTIANA HIATRIKA FIFIDIANANA (Jaona 15 : 11-16) :
- Mahaiza mifaly
- Mifankatiava ianareo
- Sakaizan’i Kristy
- Fiangonana mamokatra
Mahaiza mifaly « Izany zavatra izany dia efa voalazako taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako, dia ho tanteraka ny fifalianareo » (andininy faha-11) :
Fifaliana no andrasan’ny Tompo amin’ny mpandray anjara amin’ny fifidianana rehetra.
Na aloha, na mandritra ary aorian’ny fiffidianana dia tokony hanam-pifaliana ny Fiangonana.
Fifalian’i Kristy no tokony ho hita eo amin’ny Fiangonana ka maneho ny heviny an-kalalahana eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina ny tsirairay.
Ao an-tsaina sy ao am-pon’ny mpifidy ny hivavaka tsy hitsahatra hoe « Tompo ô Ianao no hifidy fa izaho dia fitaovana ihany »
Ao an-tsaina sy ao am-pon’izay hofidiana koa ny vavaka tsy mitsahatra hoe « Tompo ô Ianao no hifidy, ekeko izay ho valin’ny fifidiananao »
« Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo » (andininy faha-12) :
Didy sy baiko avy tamin’ny Tompo Jesoa mihitsy io mba ho fisorohana ny korontana sy ny raharaha sarotra mety hitranga eo anivon’ny fiangonana. Fifidianana mampiray sy mampiombona ao amin’ny Tompo no tanjona fa tsy mitondra fisarahana sy fitsitokotokoana. Io fifankatiavan’ny Fiangonana io dia dia mifototra amin’ny fitiavan’i Kristy azy Fiangonana ihany.
Izay Ilay fitiavana mahafoy na dia ny ainy azy (andininy faha-13).
Fizarana sy fanolorana izay heverina fa lehibe indrindra amin’ny tena no ivon’ny fifankatiavana amin’ny fifidianana ao am-piangonana. Nanazava izany i Paoly Apostoly ao amin’ ny 2 Korintiana 5 ka nitaona ny Fiangonana tany Korinto hiàla amin’ny fitiavan-tena ka mba hijery ny hafa koa mba handraisan’ireto farany ny famonjena ihany koa (2Kor 5 : 14).
Mampahatsiaro izany fa raha misy azonao atao sy atolotra ihany dia ataovy ho an’ny Fiangonana hanehoana famonjena ny hafa sy hanitarana ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany (Mpitoriteny 9 : 10 ; Romana 12 : 1,2) :
FANOLORAN-TENA HIFIDY SY HOFIDIANA.
FANOLORAN-TENA HAMONJY NY HAFA AMIN’NY ASA FANOMPOANA AO AMIN’NY FIANGONANA
« Ianareo no sakaizako, raha manao araka izay andidiako anareo, tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony ; fa efa nataoko hoe SAKAIZA ianareo… » (andininy faha 13-14) :
Sakaizan’i Kristy (L’ami ou le bien aimé du Christ) no iantsoana izay rehetra mandray anjara amin’ny fifidianana. Izany hoe tena mpinamana sy mifankahafantatra ary mifankahalala tanteraka amin’i Jesoa ka mifamato-piainana Aminy (fiainam-bavaka).
Hanjary ho olon’ny vavaka sy ny Tenin’Andriamanitra izy satria satriny foana hiresaka amin’Ilay namany akaiky dia i Jesoa Kristy.
Lasa mpiara-miasa sy mpiray tampo koa ireo rehetra voafidy ary miombom-po samy hànana ny fanantenana ny handova ny fiainana mandrakizay, araka izay voalazan’ny Soratra Masina hoe « hahazoan’izay rehetra mijery ny Zanaka (Jesoa) ka mino Azy fiainana mandrakizay » (Jaona 6 : 40).
FIAINANA MANDRAKIZAY NO TANJONA matoa manaiky hanao ny asan’Andriamanitra.
« Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, mba haharetan’ny vokatrareo » (andininy faha-16)
Famokarana no tanjon’ny fifidianana izay andrasan’i Jesoa amin’ny fiangonany.
Notendreny mba handeha isika : Ao amin’ny Soratra Masina dia irahina andeha HITORY NY FILAZANTSARA ny Fiangonana manontolo (Matio 28 : 19 ; Marka 16 : 15). Ny kristiana rehetra ao amin’ny Fiangonana dia tokony hahatsiaro fa manana andraikitra amin’ny alàlan’ny fifidianana izy. Hanavao ny fanoloran-tenany koa izy handeha hijoro vavolombelon’i Kristy eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.
Mamokatra : Mandiso fanantenana indraindray ireo voafidy : toa nafàna fo am-boalohany ihany ary rehefa jerena toa tsy mitondra ilay vokatra nandrasana ho an’ny Fiangonana akory.
Raha noana ny Tompo Jesoa indray andro dia nanantena hahita voan’aviavy mba hohaniny. Diso fanantenana anefa izy fa tsy nisy voany hany ka nozonina mba tsy hamoa intsony ilay aviavy (Matio 21 : 18-22).
Vokatra maharitra no ilain’ny Tompo Jesoa fa tsy vetivety fotsiny ihany, izany hoe ILANA FAHARETANA NY ASA FANOMPOANA na dia iatrehana zava-tsarotra aza izany.
Valim-bavaka lehibe no omen’i Jesoa Tompo « Omen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona » (andiny faha-16b) antsika Fiangonana raha mizotra antsakany sy andavany ny fifidianana karakarain’ny Fiangonana. Ireo rehetra voafidy dia ho faly ao amin’i Kristy fa tian’i Jesoa manokana noho ny fifidianany azy ary ireo izay tsy voafidy kosa hisaotra an’Andriamanitra satria tiany koa ka hivavaka ho an’ireo nofidian’i Jesoa ireo ary ho vonona hiara-miasa amin’ireo nofidiany ireo. Manaraka ho azy ny valim-bavaka regetra raha tanteraka tokoa izany. AMENA DIA AMENA.
Radoniaina TOVONJARAHARILIVA, Mpitandrina